SIDA LOO QABOOJIYO STRAWBERRIES XILLIGA QABOOBAHA: BADBAADI FAA'IIDOOYINKA - STRAWBERRIES
Strawberry waa mid sax ah oo ka mid ah berry ugu jecel yahay. Waxay leedahay faa'iidooyin badan: casiir leh, dhadhan fiican leh, udgoon leh, hodan ku ah fitamiinada, micro iyo macro macruufka. Strawberries waxay taageertaa difaaca jirka (gaar ahaan carruurta iyo dadka waayeelka ah). Qadar yar oo kalooriyeyaashu waxay ka dhigeysaa midhahaas soo jiidashada cuntada. Nasiib darro, xilliga strawberry waa mid ku-meel-gaar ah, fitamiinnana waxaa loo baahan yahay sanadka oo dhan. Goynta saxda ah ee strawberries ee xilliga qaboobaha (qaboobeyn) waxay kuu oggolaaneysaa inaad sii dheeraato xilligan iyo iiddo on beeraha dhadhan fiican leh iyo caafimaad leh ilaa beergooyska cusub.
Ma taqaanaa? Berry, taas oo aan dhammaanteen u adeegsan jirey quin-strawberries tan iyo carruurnimada, dhab ahaantii waa strawberry (cananaaska) strawberry. Strawberry Frawberry (Fragária ananássa) oo leh dhadhanka caadiga ah iyo urta waa gardarrada laga helay Holland intii lagu jiray bartamihii qarnigii XY sida natiijada ka dhalatay strawberry bikrad ah iyo strawberry Chilean. Ereyga "strawberry" (ka yimid Staroslav. "Club" - "Ball", "wareega") ayaa lagu raadjoogaa dhulalka Ruushka, Belarusiska, Ukrain ilaa iyo qarniyadii XYII-XYIII. Sidaas awgeed dhirta duurka Fragária moscháta. Marka strawberries canbaar laga arkay gobolka this (dhexe ee qarnigii 19-aad), waxay ka tirtirtay yar yar iyo midhaha hore, iyo dadka bilaabay inay u wacaan "strawberries".
Faa'iidooyinka strawberries barafoobay
Haddii aan tixgelinno su'aasha sida loo isticmaalo strawberries la qaboojiyey, markaa waa in dib loo soo celiyaa marka miraha iyo khudaarta la barafeeyey, fitamiino iyo nafaqo badan ayaa lagu kaydiyaa inta lagu jiro karinta cuntada, nadiifinta, qalajinta, iwm. Miro fiican oo la qaboojiyey waxaa ku jira halbeeg yar oo fiitamiin ah, iyo cusub. Ka dib markaad jarjartey strawberries waxaa loo isticmaalaa si la mid ah sida loo ciribtiro: waxaad cuni kartaa kaliya miro, waxaad ku dari kartaa suxuunta iyo cabitaanada kale, u isticmaali sida buuxinta for pies, dhejis waji maskaxda, iwm. Vitamins ee strawberries barafaysan qabaa dhamaan guryaha ay. 100 g of strawberries ku jira qiyaasta maalin kasta oo fitamiin C. Sida ay ka kooban tahay vitamin B9, strawberries ka badan canab, raspberries iyo miraha kale. Strawberries Fresh waxay leeyihiin saameyn faa'iido leh maxaa yeelay waxay leeyihiin:
sifooyinka anti-bararka iyo antiseptic (sidoo kale waxay ka caawisaa hargabka iyo hababka bararsan ee naasofarnx, oo leh cholelithiasis, cudurrada xubnaha, iwm.);
awooda lagu xakameeyo sonkorta dhiigga;
waxyaabo badan oo iodine ah (faa'iido leh ee lagu daaweeyo qanjirka thyroid);
Noocyo bir ah oo bir ah (loo isticmaalo daawaynta dhiig-darka);
Cannabooraha cusub, barafoobaya iyada oo aan lagu darin sonkorta, haysan qiyaasta kalooriga ah ee aan loo baahnayn - 36-46 kcal halkii 100 g. Strawberries si wax ku ool ah u uraya urka aan fiicnayn ee afka.
Waa muhiim! Marka la barafeeyey (gaar ahaan dhakhso), fiitamiinada strawberries cusub waa wax aan la burburin. Kaydso alaabada la qaboojiyay waa in aysan aheyn wax ka badan 10-12 bilood (kadib sanad kadib oo lagu keydiyo marka la jarayo, fitamiinada qaar ayaa lumaya).
Xulashada strawberries for barafka
Si loo dhigo waa muhiim in la doorto midhaha si sax ah. Maqnaansho sida aad u jilciso qudaarta loo qabo jiilaalka (oo dhan, qaabka loo yaqaan "strawberry pie", sonkorta, iwm), ma ahan wax dhib ah in aad iibsato strawberries ee suuqa ama aad ku soo qaadatid beertaada, waxaa jira xeerar guud oo aanad dayacin u qalantaa. Waxay kuugu ballan qaadayaan in cayayaanka la jarjaray ay noqon doonaan kuwo dhadhan leh, iyo faa'iidooyinka ay ka kooban tahay - ugu badnaan. Si loo qaboojiyo waa in la soo xulo strawberries:
bislaaday, laakiin aan la gooyey oo aan lakulmayn (strawberries oo aad u ba'an ayaa faafin doona marka la diiriyo, laga yaabaa inay bixiso dhadhan "sakhraansan" ama beddel ahaan, strawberries ka badan (laakiin aan lahayn cayayaanka qashinka) waxay ku habboon yihiin sameynta iyo qaboojinta qajaar la jarjarey);
cufan iyo qallalan (biyo yar - baraf yar, taas oo ciriiri doonta cabitaanka strawberry marka defrost, saameyn doonto dhadhanka);
Cabbir dhexdhexaad ah (si dhakhso ah u dhaqaajiya oo ka sii wanaagsan);
oo udgoon (macaan) iyo macaan (ka dib markii aad dhalaalayso waxaad helaysaa dhadhan iyo macaan). Go'aaminta tani maaha mid adag - waxaad u baahan tahay inaad uriso oo isku daydo;
cusub. Casriga waxaa lagu tilmaamayaa cufnaanta berry, cirifka, dabo cagaaran oo ku taal berry iyo dhadhan strawberry. Dadka leh dachas iyo jardiinooyinka ayaa lagula talinayaa in ay soo qaataan strawberries subaxdii hore (ilaa ay dharabtu dhacday) ama fiidkii marka qorraxdu socoto.
Waa muhiim! Strawberries barafaysan waa mid aad u nugul (defrostka aan habooneyn wuxuu keeni karaa waxyeelo weyn oo ku yimaad vitamiin iyo sifooyinka faa'iido ee strawberries), sidaas darteed waa inaad ogaataa sida si habboon u defrost iyaga. Waa wax aan suurtagal ahayn in la jarjiro strawberries ee microwave (burburiyo molecules iyo dilo fiitamiin) ama biyo kulul (vitamin C xanuunsan doonaa). Fasax habboon ayaa si tartiib tartiib ah, ugu horeyn qaboojiyaha (on shelf sare), ka dibna heerkulka qolka.
Diyaarinta strawberries ka hor inta lagu keydin
Kahor intaan la jarin strawberries waa in la diyaariyaa: dhoobo, goglan oo la gooyey iyo midhaha burburay si ay u doortaan. Qalabka - si aad u dhaqdo. Beerta qaar ka mid ah ayaa ku taliyay in aan ku dhaqin strawberries koray on ay sirqo gaar ah, laakiin si ay u lalabo iyaga leh timo qalajiyaha, si aan u dhaawici filimka ilaalinta on berry oo ilaaliya strawberries bakteeriyada. Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqadu waxay tahay in khatarta ugu weyn aysan aheyn bakteeriyada, laakiin ukunta duxda, kaas oo noqon kara dhulka oo ku dhici doona berry inta lagu jiro biyaha ama roobka. Waxaa lagama maarmaan ah in la dhaqo strawberries biyo joogto ah, oo ku jira baaquli weyn (maydhista colander ka hooseeya tuubada waa aan loo baahnayn - berry waa la waxyeelleeyaa, casiirku wuu tagayaa) qaybo yaryar (si aanay u burburin midba midka kale). Inta lagu jiro dharka, ka saari asliga ah. Haddii aad qorsheyneyso in aad barafoobto oo dhan, ka dibna waxa fiican in laga tago - strawberries ayaa qaabka wanaagsan u ilaalin doona oo aan lumin doono casiir.
Berry oo la dhaqay ayaa si fiican ugu habboon on shawlada / warqadda tuwaal / xaashida xaashida qalajiyaha (waraaqda ama qoryaha waxa fiican in la geliyo caag balaastik ah).
Xulashada iyo diyaarinta suxuunta loogu talagalay qaboojiyaha strawberries
Cuntooyinka caaga ah ayaa ugu habboon loogu talagalay cawska (strawberries) (noocyo badan oo noocyada suxuunta ah ee qaababka iyo cabirrada kala duwan ayaa lagu iibiyaa). Cellophane ama polyetylen ayaa sidoo kale ku habboon, laakiin si fudud ayaa loo jeexay qabow. Shardiga ugu muhiimsan ee suxuunta:
wax ur ah;
Cabbirka saxarada ayaa ku xiran tirada macaamiisha. Waa suurad wacan in la qaboojiyo qaybaha - hal weel waa inay ku jiraan qaddarka strawberries, taas oo la cuni karo waqti. Cuntada la soo celiyey looma oggola.
Hababka Cagaaran ee Strawberry
Barafka strawberry - Ma ahan mid fudud sida ay u muuqato: strawberries isku laab bacda oo lagu meeleeyay barafeeyaha. Dabcan, waxaa suurtogal ah in la qaboojiyo habkan, laakiin natiijadu ma noqon doonto mid la mid ah sida aan jeclaan lahayn. Waxaa jira siyaabo kala duwan oo loo xakameyn karo strawberries, iyada oo gargaar ay nooca berry ah ku haynayaan qaabkooda, guryaha gaarka ah, carafka iyo dhadhanka.
Ma taqaanaa? Dunida waxaa jira kumanaan nooc oo strawberries ah (200 oo sano oo shaqo la'aan ah oo sabirro ah maaha mid aan waxtar lahayn). Dhammaan noocyada noocaas ah waxaa laga soo qaatay dhirta kaliya ee geedka - strawberry.
Guuldarro qudaarta oo dhan
Midka ugu habboon waa isticmaalka dufanka horay loo sii diyaariyay: miro diyaarsan oo la diyaariyay ayaa ku faafay hal lakab oo ku yaal saxaarad ama saxan (ma aha inay la xiriiraan midba midka kale). Kadibna saxaarada ayaa la dhigayaa 2-3 saacadood barafeeyaha marka la qaboojiyo habka qaboojinta ("Super Freeze").
Ka dib markaa, berry waa la gelin karaa bacaha ama weelasha iyo ku rid barafeeyaha si loo sii qaboojiyo iyo kaydinta. Berry noocan oo kale ah looma lumin doono qaabkooda.
Haddii aad rabto in aad qurxiso koob dhalaal ah ama khamri leh, waxaad barafoobi kartaa barafka oo dhan barafka. Berry diyaar u ah in la geliyo wasakhaha barafka, ku shub biyo nadiif ah iyo qaboojiso.
Strawberries leh sonkor
Kahor intaan la jarin strawberries oo sonkor leh, waxaad u baahan tahay inaad doorato ikhtiyaarka adiga kugu haboon (wakhtiga, xoojinta shaqada, qadarka sonkorta):
isweydaarsi miro dhan oo sonkor ah. Per kilogram of berry wuxuu u baahan yahay 300 garaam oo sonkor ah (waxoogaa yar lagu jajabiyay blender ama Booqdaha kafeega) ama budada. Berry la diyaariyey (iyada oo aan stem) waa in la dhigo lakabyo hoose ee weelka, ku shub sonkorta budada ah. Ka tag 2-3 saacadood qaboojiyaha oo u wareeji strawberries si weel kale, ku shub sharoobada meel isla. Ka dib markaa, xir xiraha iyo qaboojiyaha qaboojiyaha;
doorasho isku mid ah, laakiin aan lahayn sharoobo. Ku shub berry ah budada oo isla markiiba qaboojiyaha;
Barafka la jarjaray ee la kariyey ee sonkorta leh. Saameynta qudaarta iyo sonkorta waa 1 x. 1. Strawberries loo diyaariyey (berry ka weyn) ayaa ku haboon in la karinayo) waxaa lagu shubay sonkorta oo lagu jajabiyay blender.
Isku dar waxaa lagu ridaa weelasha (koobabka caaga ah, dhalooyinka barafka) iyo barafaysan. Waa in maskaxda lagu hayaa in qiimaha nafaqada ee strawberries la qaboojiyey sidan oo kale u kordhay 96-100 kcal.
Waa muhiim! Heerkulka ugu wanaagsan ee lagu keydiyo strawberries waa laga bilaabo -18 ilaa -23 heerka Celsius. Cagaarshowga la qaboojiyey ee heerkulkani waxa lagu kaydiyaa 8 illaa 12 bilood. Marka la qaboojiyo inta u dhaxeysa 5 ilaa 8 darajo oo ka hooseeya eber, berry waa la keydiyaa saddex bilood.
Frost Beerka Strawberry
Laga soo bilaabo strawberries la karin karaa karaa iyo qaboojiyaha strawberry saliid. Strawberries diyaarsan (oo aan caleemaha miraha lahayn) waa inay ahaato dhul leh blender (fal waxashnimo leh, khasaare marayo shaandho, iwm.). Cabbirka soo baxay waxaa la dhigaa weelasha (koobabka) iyo qaboojiyaha. Sonkorta waxaa lagu dari karaa ka dib markii la jarayo. Isbedelka, waxay ku dhaqmaan shimbirta cagaarka ah ee baradho sida laysku gooyo oo iyaga lagu qaboojiyo. Cuntada la qaboojiyay ayaa sidoo kale aad u fiican oo loogu talagalay maaskaro waji ah, looska iyo shoolada.
Ma taqaanaa? Sida rasmiga ah, xakameynta alaabooyinka waxay soo noqotaa ilaa 1852, markii ugu horeysay ee patent-bixinta hilibka hilibka ee barafka cusbada laga soo saaro England. Fruit wuxuu bilaabay inuu barafoobo 1908 gudaha Maraykanka (Colorado) oo leh weelal qashinka waaweyn ah. Sanadkii 1916-1919 Cilmi-yaqaanka Jarmalka K. Verdsey wuxuu soo saaray habka lagu yareeyo miraha khudradaha tafaariiqda yaryar. Sanadkii 1925, Mareykanku waxa uu ahaa habka loo yaqaan "naxdin", taasoo bixisay K. Berdsay (isaga "isaga oo ka soo jeeda Eskimos, oo kalluumeysiiyay kalluunka isagoo ku jira 35 digrii Celsius). Sanadkii 1930-kii, shirkadiisii, Shimbiraha Ender-ka ah ee Cunnada la Mamnuucey, waxay bilaabeen inay iibiyaan hilibka, miraha iyo khudradda la qaboojiyey hab cusub. Tan iyo 1950kii. Iyada oo ay soo ifbaxday qaboojiyeyaasha gudaha, cuntooyinka la barafoobay ayaa noqday kuwo baahsan.